Amaphutha ajwayelekile ayi-7 Ku-UAE Arbitration Law | Abameli Bokulamula i-UAE
Amaphutha ajwayelekile ayi-7 Ku-UAE Arbitration Law
Amafemu Omthetho Asezingeni Eliphezulu eDubai
Umthetho Wokulamula e-UAE
Ukukhula kanye nokuhwebelana kwembulunga yonke kwamabhizinisi okuwela imingcele kanye nokuhweba e-UAE kuyisungule njengendawo yokuhlangana yebhizinisi, abatshalizimali kanye nezintshisekelo zikahulumeni. Nakanjani, obunye balobu budlelwano buyawohloka, futhi amaqembu ngokushesha abheka izindlela ezingcono kakhulu zokuxazulula izingxabano zabo. Ezimweni eziningi, lokho kungukulamula.
Uhlaka lwezomthetho nolwe-arbitral lwe-UAE ngokuqinisekile luyingqayizivele futhi luyinkimbinkimbi, nolwandle nolwandle, umthetho wezomthetho kanye neziphathimandla zomthetho ojwayelekile, kanye nokuqhutshwa kwesiNgisi nesi-Arabhu.
Emaqenjini afuna ukuxazulula izingxabano ngokusebenzisa izinketho ze-UAE zokulamula, inani elikhulu lokukhetha nokucatshangelwa ongakwenza kungamangalisa. Noma iveza amathuba amaningi nezinketho, ibuye iqinisekise nethuba lephutha.
Isizathu ukuthi akuvamile ukuthi amaqembu angene ngokushesha futhi ngokusebenzisa le nqubo ngokungabi nasineke okufanayo okuholele empikiswaneni ekuqaleni. Amaphutha angenzeka kunoma yiziphi izinyathelo nezakhi ezakha inqubo ye-Arbitral, kusukela esicelweni soMmangali sokulamula, ukulalelwa kwenqubo, ukudalulwa, izitatimende zofakazi, ukulalelwa, kanye nomklomelo wokugcina.
Isigaba ngasinye sokulamula sinezingibe ezivamile ezigoqela izisulu eziningi, yingakho isiqeshana esinjengalesi singabonakala singanele. Akunandaba, siqokomisa (ngokuhleleka okuthile) amanye amaphutha ajwayelekile enziwe ezigabeni ezingezansi; futhi unikeze izinyathelo ezingokoqobo zokuthi ungazigwema kanjani.
Amaphutha ajwayelekile ku-Arbitration ye-UAE
Bheka amaphutha ajwayelekile angezansi kunqubo esebenzayo yokulamula, kusuka ekubhalweni kwezivumelwano zokulamula, amandla olawulo, imiklomelo yokulamula, kanye nokusebenza.
1. Ukunikeza Amandla Okuvumelana Nokulamula
Umthetho we-UAE ngokwesiko unquma ukuthi uthishanhloko kumele anikeze amandla athile kumenzeli ngaphambi kokuthi lowo menzeli abeke uthishanhloko ngokusemthethweni esivumelwaneni sokulamula. Umthetho udinga ukuthi uthishanhloko asho ngokusobala esivumelwaneni se-ejensi ukuthi umenzeli unamandla okungena esivumelwaneni sokulamula egameni labo.
Ngaphandle kwalokho, kunengozi yangempela yokuthi isivumelwano sokulamula esivumelwaneni asisebenzi futhi asiphoqeleli. Akunandaba ukuthi umenzeli ubenegunya elizwakalayo lokusayina inkontileka esikhundleni senhloko (kodwa hhayi ngqo isivumelwano sokulamula esiqukethwe ngaphakathi). Umthetho Wokulamula uqhubeka ukhombe lokhu njengesizathu sokuphonsela inselelo umklomelo wokulamula. Izinkampani zomhlaba wonke nezezifunda zivame ukungazinaki lezi zidingo ezisemthethweni eziholela emiphumeleni emibi.
2. Ukuhlanganisa Umshwana Wokulamula
Ubudlelwano obuseduze phakathi kwenqubo yokulamula kanye nesigatshana sokulamula esivumelwaneni senza kube yinto ekhohlisayo kakhulu. Iphutha elincane ekubhaleni kungaholela ezindlekweni nasekubambezelweni okungenasidingo noma nasempini yasenkantolo yokuba khona kwesivumelwano sokuhumusha umbandela onjalo. Amanye amaphutha ajwayelekile anezigatshana afaka phakathi;
Ukuhlinzeka ngemikhawulo emifushane engenangqondo yenkantolo,
Ukuqamba igama lesikhungo noma umlamuli ukuba athathe isinyathelo ongekho noma oqanjwe ngegama noma owenqaba ukwenza,
Ukudweba isigatshana esingaphelele,
Ukubeka imingcele engaqondakali kububanzi besigatshana, et cetera.
Ukulamula kuyindaba yenkontileka, futhi kukhona izindatshana ezinemininingwane umuntu angathintana nazo ekubhalweni kwezigatshana zokulamula. Imishwana eminingana yokulamula ekhishwe yi I-ICC, i-LCIA, i-ICDR UNCITRAL, ne-DIAC ayatholakala ukuze asetshenziswe. Zenziwa ngamabomu ngendlela esezingeni eliphansi (ukubhekela izimo ezahlukahlukene) futhi kufanele zisetshenziswe kulelo fomu ngaphandle kokuzifaka kabusha.
3. Ukusebenzisa Kubi Ukuhlolwa Kwemibuzo KoFakazi
Lokhu kwenzeka kakhulu lapho abameli bezama ukusebenzisa imibuzo ebuzwayo ukufakazela icala labo enhloko noma behluleka ukuhlela ukubuzwa imibuzo ngaphambi kokulalelwa. Ukuhlonywa imibuzo kungenye yamathuluzi anamandla kakhulu atholakalayo ukweluleka ngesikhathi sokulalelwa, kepha abameli:
buza imibuzo evulekile lapho uphenywa ngemibuzo, uvumela ufakazi ophikisayo ukuthi asho “uhlangothi” lwakhe endabeni,
basebenzise ukuphenywa ngemibuzo ukufakazela icala labo eliyinhloko,
ukuchitha isikhathi ekubuzweni kwemibuzo kuphonsela inselelo kanzima kuwo wonke ama-jot ekuhlolweni okuqondile kofakazi, ikakhulukazi ezindabeni ezingabalulekile.
Iseluleko esisebenza kunazo zonke lapha ukulungiselela icala lakho kahle. Yazi ukuthi yini ofuna ukuyithola kufakazi, yenza uhlu olufushane bese unamathela kuyo. Ngaphandle kwesimo esingajwayelekile, ngicela umelane nesilingo sokufaka ufakazi amahora amaningi kukho konke akusho.
4. Ukumosha Amathuba Okuncenga Umxazululi/inkantolo
Labo abenza leli phutha ngokuvamile benza kanjalo ngokucabanga ukuthi umlamuli wabelana ngolwazi lwabo ngecala; ukwehluleka ukuhlaziya nokuhlela udaba lwabo; nokugcwalisa izingxoxo ezinde, ezingenakuphikiswa.
Okufingqiwe kufanele kube ngqo futhi kufushane ngangokunokwenzeka. Noma umlamuli engabeki umkhawulo wekhasi kwizifinyezo, kungcono ukuthi uye emikhawulweni emifushane yenhlangano, yezwe, noma yendawo njengeziqondiso. Futhi, zama ukugcina ukuzwa okufushane kufushane kunamakhasi angama-30.
5. Ubuciko bomdlalo obungadingekile
Ngenkathi ukulamula okuthile kungadinga ama-macho chops afanayo namacala, abanye abameli basebenzisa amaqhinga we-hardball, ukuthambekela, nokubambezeleka kaningi kakhulu futhi kubalimaze. Laba bameli ngokuvamile:
Yenqaba ukubambisana nganoma iyiphi indlela,
Ngokuphikisana cishe nawo wonke umbukiso ohlinzekwa ekulaleleni kolunye uhlangothi,
Ngokungazelelwe "thola" imibukiso ebalulekile ekulaleleni,
Hlela ukufakwa kwemali unilaterally.
Ukulamula, njengokufaka icala, kuyinqubo yokuphikisana; lokho, nokho, akuyona ilayisense yokuziba ubuchwepheshe nobuntuthuko ngenxa yokushaywa kwesifuba nokungabambisani. Kungcono ukuhlela ukutholakala kwakho futhi uphakamise uhlelo lokutholana ngokuhlanganyela oluhlangabezana ngokufanele nezidingo zamaqembu necala.
6. Ukuthatha Imithetho Yobufakazi Ifana Naleyo Esenkantolo
Ngeshwa, kuvame kakhulu ukuthi abameli bahluleke ukuthatha isikhathi ukuqonda imithetho yobufakazi; futhi benze ukuphikisana kobufakazi okungaphumeleli. Ngokuvamile, imithetho yobufakazi esebenza ezinkambisweni zenkantolo ayizibophi izingxoxo zokulamula. Umeluleki kufanele azi ukuthi yimiphi imithetho ekhona futhi enze ngokufanele.
7. Ukwehluleka Ukuqhuba Ukukhuthala Okufanelekile Kumxazululi
Kungcono ukwazi isizinda somsebenzi womlamuli wakho nomlando womsebenzi; wazi izakhi zobufakazi obudingekayo, bese ulungisa udaba lwakho ngokufanele. Qhubeka nokukhetha kwakho uma wenelisekile ukuthi umlamuli uyisazi embonini yeklayenti lakho noma ezindabeni ezithile zezomthetho ezivezwa yicala lakho. Kubalulekile futhi ukuthi abe ngumuntu ohlakaniphile ojwayele uku "zama" amacala phambilini, uma kungenjalo njengombonisi noma umlamuli ngaleso sikhathi abe ngumeluleki.
funa Iseluleko Sengcweti Kwezazi Zethu Zokuxazulula Ezinolwazi
Kuningi okungaqondakali ngendlela yokuthi ukulamula kusebenza kanjani nokuthi yini okulindeleke eqenjini. Ukulamula kuyinqubo yezomthetho ehloselwe ukufaka esikhundleni secala. Inqubo yokulamula kunoma iyiphi indawo inzima ngokwanele ukuba idinge ukucatshangelwa okufanele kuzo zonke izici nezigaba zokusombulula, noma ngabe kusemthethweni noma akukho emthethweni. Imvamisa, ukunakwa okudingekayo emininingwaneni kuyisici esingajwayelekile kubachwepheshe nakubachwepheshe bezomthetho abanolwazi.
Umthetho wokulamula uyingxenye ebaluleke kakhulu yanoma yiliphi ibhizinisi noma impilo yezohwebo, ikakhulukazi e-UAE. Umsebenzi womxazululi ubalulekile ekusebenzeni kahle kwanoma yiliphi ibhizinisi, ikakhulukazi lapho kuphakama izinkinga zemibango yezentengiselwano. Bala izinketho zakho ezingokomthetho bese usebenzisa izinsiza ze-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ukuze uxazulule noma iyiphi ingxabano ongase ube nayo nelinye iqembu.
I-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants iyifemu yezomthetho ehamba phambili egxile ekuxazululeni, ukulamula nezinye izindlela zokuxazulula izingxabano e-Dubai, e-UAE. Sinabameli bokulamula abanolwazi olunzulu nabameli e-UAE. Xhumana nathi namuhla!